Ngaba i-selenium inokuwunciphisa umngcipheko we-osteoporosis? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
I-Osteoporosis yimeko eshiya amathambo ethe kratya kwaye engena. Kubonakala ngakumbi kwabasetyhini abangaphezulu kweminyaka engama-45 ubudala. Njengoko esi sifo siqhubela phambili ngokuguga, esi sifo sonyusa umngcipheko wokuqhekeka kwemimandla enje ngomqolo, iimbambo nentamo yentsimbi.
1 Imiba yengozi
2 Yintoni iSelenium?
3 Selenium kunye ne-osteoporosis
4 Ixesha elizayo
Kukho izinto ezinobungozi kwi-osteoporosis engenakuphepheka, njengobudala obudala kunye nesini. Kodwa iingcali zichonge umngcipheko onokutshintsha, njengokutshaya icuba nokusela utywala, okwandisa imeko.
Ukongeza, izazinzulu zikholelwa ekubeni izinto zokutya zinokudlala indima ebalulekileyo. Ukuza kuthi ga ngoku, uninzi lophando malunga nesondlo kunye ne-osteoporosis lujolise kumthombo onokuthenjwa we-calcium ngenxa yendima yayo ebalulekileyo kwimpilo yethambo.
Nangona kunjalo, ababhali bophando lwamva nje e-China bakholelwa ukuba ezinye ii-micronutrients zinokuchaphazela umngcipheko we-osteoporosis. Bathathe isigqibo sokugxila kwi-selenium.
I-Selenium iyiminerali ebalulekileyo kwimpilo yabantu. Ithatha inxaxheba kwiinkqubo ezininzi zomzimba kwaye ikho kwiintlobo ngeentlobo zokutya, kubandakanya iintlanzi, iqokobhe, inyama ebomvu, iinkozo, amaqanda, inkukhu, isibindi kunye negalikhi.
Nangona ezinye izifundo zangaphambili zijonge ifuthe le-selenium kwi-osteoporosis, ubungqina abuqinisekanga.
Ke ngoko, ukulungisa lo msantsa, abaphandi baqokelela idatha evela kubathathi-nxaxheba abangama-6,267 abatyelele iZiko leeMviwo leSebe lezeMpilo leSibhedlele iXiangya kwiYunivesithi ekumazantsi eChina. Ulwazi malunga neendlela zokuphila kunye nedatha yabalwa. Bonke abathathi-nxaxheba babeneminyaka engama-40 ubudala okanye ngaphezulu kwaye bazalisa iikhweshine ezinemibuzo malunga nokutya rhoqo.
Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba oososayensi bajonge ezinye iiparameter ezinokuchaphazela i-osteoporosis, njengokuphuza, ukutshaya, isalathiso sobunzima bomzimba (BMI), kunye nenqanaba lomsebenzi womzimba.
Selenium kunye ne-osteoporosis
Ngokubanzi, i-osteoporosis yayikho kwi-9.6% yabathathi-nxaxheba - 2.3% emadodeni kunye ne-19.7% kwabasetyhini. Sebenzisa idatha ekwiphepha lemibuzo, oososayensi bahlule abathathi-nxaxheba ngokwamaqela amane, abekwa kwinqanaba eliphezulu ukusuka kwelona liphezulu ukuya kwelona liphantsi le-selenium.
Njengoko bekulindelekile, abantu abanamanqanaba asezantsi e-selenium ekutyeni banomngcipheko omkhulu wokukhula kwamathambo. Ababhali baqwalasele ubudlelwane bempendulo yedosi. Ngamanye amagama, ukutyiwa kwe-selenium kwakudityaniswa kakubi nomngcipheko wesifo: kokukhona umntu esitya, isezantsi ingozi. Kwanasemva kokulawula izinto ezinje ngobudala, isini, kunye ne-BMI, ubudlelwane babusabalulekile.
Ke, ababhali baqukumbela ngelithi: "Iziphumo zophononongo lwethu zinokubonelela ngengqondo ye-pathogenesis ye-osteoporosis, kunye nohlalutyo lwexesha elizayo lokutya, kubandakanya ukongezwa kokutya kwe-selenium, kumngcipheko wesifo kufanelekile."
Kwinqaku, baxoxa ngeendlela ezithile apho i-selenium inokuchaphazela umngcipheko we-osteoporosis. Bacacisa indlela umsebenzi weemolekyuli zomzimba, ezinje ngee cytokines, ezikhuthaza ukuqhubela phambili kwe-osteoporosis kwaye i-selenium inokuthintela ezi molekyuli.
Ngokufanayo, i-selenium yinxalenye ye-selenium exhomekeke kwi-enzymes, ethi ifunxe iintlobo zeoksijini ezisebenzayo kwiseli. Ke ngoko, amanqanaba asezantsi e-selenium anokunyusa uxinzelelo lwe-oxidative.
Oku kubalulekile kuba, njengoko ababhali becacisa, bukhona ubungqina bokuba uxinzelelo lwe-oxidative lunokuchaphazela ukuqhubela phambili kwe-osteoporosis.
Iingcali zikholelwa ukuba olu luphononongo lokuqala lokunxibelelana ngqo nokutya kwe-selenium ukuya kwi-osteoporosis. Nangona basebenzise ubungakanani besampulu enkulu kwaye babonisa uluhlu olwahlukileyo lwezinto eziguquguqukayo, kusekho ukusikelwa umda okukhulu.
Bacacisa kananjalo ukuba amanqanaba e-selenium ekutyeni anokuhluka kwaye iindlela zokulungiselela zikwachaphazela inani le-selenium ekhoyo.
Ngaphaya koko, kwizifundo zokujonga ezinje ngale, akunakwenzeka ukuba kuqinisekiswe ubudlelwane obusisiseko phakathi kokutya kwe-selenium kunye neziphumo zezifo. Kuhlala kunokwenzeka ukuba ezinye izinto zichaphazele iziphumo.